Samadhan News जग्गाको पैसा माग्दा यौन प्रस्ताव राख्ने पोखराका रामकुमार पक्राउ – SAMADHAN NEWS
सामाजिक सञ्जालमार्फत महिलालाई अश्लील म्यासेज लेख्ने पोखराका एक पुरुष पक्राउ परेका छन् ।
पोखरा महानगर ११ काहुँखोलाका ४६ वर्षे रामकुमार खत्रीलाई कास्की प्रहरीको सहयोगमा साइबर ब्युरोले शुक्रबार बिहान पक्राउ गरेको हो ।
कास्की प्रहरीका निमित्त प्रवक्ता इन्स्पेक्टर दीपक केसीका अनुसार ब्युरोले खत्रीलाई पक्राउ गरेर पठाइदिन भन्दै बिहीबार पत्र पठाएको थियो । ‘बिहान पक्राउ गरेर काठमाडौं पठाइसक्यौं,’ इन्स्पेक्टर केसीले समाधानसँग भने ।
भएको के हो ?
‘हाम्रो धर्म मान, तिमीलाई दिन भएको सबै पैसा दिन्छौं,’ पुस पहिलो हप्ता फूलबारीकी महिलालाई फेसबुकमा मेसेज आयो । मेसेज त्यतिमै सीमित रहेन । अझै अर्काे मेसेज आयो, ‘तिम्रो बुढालाई दिन भएको ३२ लाख रुपैयाँ म सबै दिन्छु, प्रकाश मेरो साला हो, तिम्रो बुढालाई सच्चाई धर्मको विरोध नगर्न भन । हाम्रो धर्म राम्रो छ, तिमी पनि मान तिमिलाई गाडी, पैसा दिन्छु ।’
महिलालाई मेसेज पठाउने रामकुमार खत्री नै थिए । खासमा ती महिलाका श्रीमान्ले चितवन माडीको जग्गा २०७६ साउन २० गते रामकुमारका साला भनिने प्रकाशदीप गैह्रे (३८) लाई बेचेका थिए । सोही जग्गाको रकम लगातार माग्दा पनि ती महिलाले पाउन सकेकी थिइनन् ।
ती महिला र उनका श्रीमान्ले आफूले पाउनुपर्ने रकम माग्दा सास्ती झेलेको यो पहिलोपटक होइन । यसअघि २०७६ असोज ४ गते उनका श्रीमान्लाई आफूहरुले नै अपहरण गरेको र प्रहरीले केही गर्न नसकेको भन्दै रामकुमार लेडर देखाएका छन् । ‘हामी प्रकाश र विजयले तिम्रो बुढालाई अपहरण गरेको हो, प्रहरीले के ग¥यो ? हाम्रै जित भयो,’ रामकुमारले मेसेन्जरमा लेखेका थिए ।
यतिमात्र होइन, सोही दिन रामकुमारले पैसा चाहिए आफू र प्रकाशसँग यौन सम्पर्क राख्नुपर्ने भन्दै धम्की दिएका थिए । ‘तिमीलाई दिन भएको सबै पैसा तिर्दिन्छौं, सच्चाई धर्म मान, सबै दिन्छौं,’ उनको म्यासेज थियो, ‘प्लिज प्रकाश र मलाई बेलाबेलामा सेक्स गर्न देऊ, तिमी सेक्सी छौ ।’
जग्गाको पैसा माग्दा यौन प्रस्ताव राखेपछि‘
कालीगण्डकी नियन्त्रण गर्न अध्ययन
गैंडाकोटमा फाइनप्रिन्ट फिभर हुँदै
उद्यमशीलता पढाउँदै पोखरा विश्वविद्यालय
पोखरा र पश्चिम नेपालका व्यवसायीको प्रश्नः भेला हुन हुने, नाका खोल्दा कोरोना सर्छ ?
सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको वार्षिकोत्सव
सरकारसँग विप्लव समूहको सहमति
झिक्न थालियो फेवाको गेग्य्रान
बाँध मर्मत सकिएपछि फेवातालमा पानी भर्न सुरु, भरिन एक महिना लाग्ने
घट्यो फेवातालको क्षेत्रफल, तोकियो चार किल्ला
उच्च बार महिला समितिलाई सहयोग
शनिबार, १५ फागुन २०७७
रिठेपानी डाँडो ६ महिनाभित्र काट्न निर्देशन
बराह तालमा धौलागिरि हिमालकाे छायाँ